Ngwurugwu ohuru nke Storelọ Ahịa Play dị ugbu a nye onye ọ bụla | Gam akporosis
Google agwula ihe di egwu. Anyị enweela ike ịhụ otu esi webata ya na ngwa ha, mana izu ole na ole gara aga E webatara ya n’oge ule na Storelọ Ahịa Play. Azu ahia nke na etinye uzo di ocha karie ihe anyi jiri, nke mekwara anyi ihe ohuru akara ngosi dị na ụlọ ahịa.
Amabeghị mgbe atụmatụ a ga-abata na eze, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ekwuolarị na ọ ga-eme n'oge ọkọchị, ikekwe n'August. O mechara bụrụ eziokwu. Ọdịdị ọhụrụ nke Storelọ Ahịa Play, dabere na Ihe Akụrụ bụ ihe dị adị ma dịịrị onye ọ bụla.
Nke a bụ ụdị 15.8.23 nke Playlọ Ahịa Google ebe anyi huru imewe ohuru a. Ya mere, ihe ị ga - eme bụ imelite ngwa ahụ na ekwentị gam akporo gị. Ya mere, ọ bụghị ihe na-ewetara nsogbu, na mgbakwunye, mmelite ahụ amalitelarị iwu maka ndị ọrụ niile.
Mgbanwe mgbanwe ahụ ahapụghị anyị ọrụ ọhụrụ na ngwa ahịa. Enweghị atụmatụ ọhụụ, ọbụlagodi maka oge ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ mgbanwe dị ịtụnanya, ebe ọ na-ahapụ ụlọ ahịa ahụ ihe doro anya na nke a. Mana ihe niile bụ ihe gbasara ịmalite.
Emebere nhazi ahụ izu ole na ole gara aga. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe kpatara na anyị amaghị, Playlọ Ahịa Google Play kpochapụrụ otu ihe na obere oge. Enweghị ihe kpatara n'oge a. Mana n'ikpeazụ imewe ahụ bụ nke ndị ọrụ niile dị na ụlọ ahịa ahụ.
Anyị ga-anọ na nche maka atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ụlọ ahịa ugbu a ka emepụtara ọhụụ ọhụrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ụdị ọhụụ, naanị ị ga-eme ka ngwa ahụ dị na Storelọ Ahịa Play na ekwentị gam akporo gị. Kedu ihe ị chere maka ụdị ọhụụ nke ụlọ ahịa ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọhụrụ interface nke Storelọ Ahịa Play dị maka onye ọ bụla
Google Fit ugbu a na-ewebata nleba anya ụra